Libido, Horan-tsary Fanadihadiana Nisarika Ny Ejiptiana Hiresaka Momba ny Firaisana Ara-nofo · Global Voices teny Malagasy
Libido, Horan-tsary Fanadihadiana Nisarika Ny Ejiptiana Hiresaka Momba ny Firaisana Ara-nofo
Voadika ny 13 Oktobra 2013 12:44 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, Italiano, عربي, 繁體中文, 简体中文, English
Fanadihadiana fohy iray mitondra ny lohateny hoe “Libido” no niteraka resabe momban'ny fananahana tao Ejipta. Sady nosoratan'i Youssef Alimam no novokariny ny Libido, ary nampiasa fomba maro samihafa izy mba hiresahana ny olana ara-pananahan'ny tanora. Ambonin'ireo fanadihadiana niarahana tamin'ireo tanora momba ny heviny mikasika ny firaisana ara-nofo, dia milaza ny tantaran'i Mazen ihany koa ilay horonantsary, tovolahy Ejyptiana iray izay nahita sakana maro rehefa nanao izay nety tamin'ny fiatrehany ny filany ara-nofo.
Mbola mipetraka ho olana ny resaka manodidina ny fiainana ara-pananahana ao Ejypta. Voafetra ihany ny fahalalàna azo avy amin'ny fampianarana ny ara-pananahana ary tsy dia misy miraharaha, araka ny fanadihadiana natao vao tsy ela akory tany aminà sekoly Ejyptiana. Fanadihadiana iray tamin'ny taona 2010 no nahitana fa ny iray ampahaefatry ny tanora ihany no mba niresaka tamin'ireo ray aman-dreniny ny amin'ny fiovàna eo amin'ny fialàna sakana. Nanamafy izany olana izany ny tatitra iray vay haingana, avy amin'ny Fikambanana Iraisam-pirenena miaro Zon'olombelona ary nanameloka ny fandikan'ny Governemanta ny zon'ny tanora amin'ny fanakanana azy ireo tsy hahalala ny momba ny fahasalamana ara-pananahana sy ny tsy fanomezana ireo sampan-draharaha ilaina mba hampaherezana azy ireo amin'ny fananany fiainana feno fahasalamana.
Maro karazana ireo hevitra nanoloana ny Libido; tao ireo nidera ny risi-po nentina tamin'ny firesahana lohahevitra manahirana toa izany, tao ihany koa ireo sadaikatra amin'ny fahitàna hafatra ambadika izay mamporisika ny firaisana ara-nofo mialohan'ny fanambadiana. Nisy fanehoan-kevitra sasantsasany koa nanameloka ny firaisana ara-nofo mialohan'ny fanambadiana ho fahotana sy mandika ny moraly, kanefa tao ihany koa ireo nanohana fa fa fomba iray hahitana olon-tiana izany ary tsy misy manan-jo hitsara ny hafa mikasika izay ataony momba ny fiainany manokana.
Niresaka tamin'ny mpanatontosa ny horonan-tsary ny Global Voices Online. Ity ny fanadihadiana.
Global Voices: Mba lazao aminay misimisy ny tantara ao ambadiky ny horonan-tsary Libido.
Youssef Alimam: Libido no tetikasako tamin'ny famaranana ny fianarako tao amin'ny High Cinema Institute (Sekoly Ambony momba ny Sarimihetsika) tao Caire. Nieritreritra aho fa tiako ny hiresaka momba ity lohahevitra ity satria nanontany tena fatratra momba izany koa aho tamin'ny fahazazàko. Tsy mba nahazo fampianarana ara-pananahana aho tany am-pianarana, ary toy ny an'ny ankizy rehetra ihany ny fahalianako, ka noho izany dia nieritreritra aho fa tena hahaliana tokoa raha izaho mihitsy no hametraka izany fanontaniana izany voalohany indrina, fony aho vao 20 taona. Avy eo aho nanomboka nanao fikarohana, hatramin'ny fotoana nieritretako hanaovana an'ity horona-tsary ity, sy ny fomba hanatontosako azy.
GV: Inona avy ireo tena vato nisakana tamin'ny fanatontosàna ny horonantsary?
YA: Hatramin'ny voalohany no efa niheverana azy ho tena hadalàna, ary maro ireo niteny tamiko hoe: “tsy azonao hatao io”. Tsy resy lahatra aho, satria tokony ho sokafana izany adihevitra izany, ary ireo ankizy rehetra manerana an'i Ejypta dia afaka mianatra amin'ny fomba izay tsy voatery ho “nentin-drazana”. Mahafantatra ny zavatra rehetra izy ireo, nefa diso ny zavatra hiafampitàny eo amin'izy samy izy, ka mahatonga azy ireo hilaza angano fotsiny. Heverin'izy ireo ho fahotana na dia ny mahafantatra fotsiny ihany aza, indrindra moa fa ireo ankizivavy izay tsy afaka miresaka akory amin'ireo ray aman-dreniny, tsy afaka mahazo torolalana avy amin'ny sekoly, fa mionona amin'ny tsy fahafantarana fotsiny, ka avy eo tampoka loatra aminy ny atao hoe fialàna sakana, ka manjary feno horohoro izy amin'ny fiatrehana an'izany.
Raha ny fanatontosàna ny horonan-tsary amin'ny toe-bola ambany indray dia nahazo fanampiana be dia be avy tamin'ireo namako aho, izay tena natoky ahy sy ilay loha-hevitra ary ny fomba nanehoako azy. Ireo tao amin'ny sekoly ambony misy ahy, rehefa avy nijery ilay horonantsary, dia nanome fankasitrahana feno ahy sady nino ny tolona ataoko. Tena nahazo fanohanana lehibe avy tamin'ireo mpampianatra ahy aho.
GV: Mbola tsy ampy iray volana akory, ny Libido dia efa anarivony sahady ireo nijery azy tao amin'ny YouTube. Nanao ahoana ny akony?
YA: Tsy nampoiziko hiparitaka be toy izany izy ity, nefa vantany vao nozaraiko ilay izy, dia hitako sahady ny fiakatry ny isa anarivony tao anatin'ny andro maromaro. Tena tohina aho, ary nisy aza olona olona tsy fantatro akory nizara ilay izy. Marobe ireo olona nanome fanohanana tao anatin'ny fanehoan-kevitra nataony, ary nilaza fa efa niandry zavatra hitranga toy izao izy ireo.
GV: Tsy toy ireo mpanatontosa horonan-tsary hafa, fa avy hatrany ianao dia nizara ny Libido tao amin'ny YouTube, Facebook ary Twitter. Ahoana ny fahitanao ny anjara asan'ny haino aman-jery amin'ny famoronana adihevitra aminà resaka tahàk'izao?
YA:Nahazo loka maromaro ny Libido, ary nivoaka tao amin'ny aterineto izany taorian'izay, ka nahazo fankatoavana taminà hetsika maro sy avy aminà tanora any rehetra any. Niavaka ny fanehoan-kevitra azoko hatramin'iny. Tena faly aho fa nisokatra tamin'ilay loha-hevitra ry zareo, ary koa satria nahakasika olona avy any aminà firenena hafa ilay izy.
Taorian'ny fivoahany tao amin'ny aterineto, dia niparitaka tamin'ny ny olona maneran-tany izany, ary ohatr'izay hatrany hatrany, noho izany dia mihevitra aho fa tena nanampy ny fielezany tokoa ny fampiasana ny aterineto.
Youssef Alimam, mpanatontosa (eo ankavia) ary Mazen, mpandray anjara (eo ankavanana) amin'ny iray amin'ireo seho ao amin'ny horonan-tsary. Nalaina tao amin'ny pejy FaceBook.
GV: Nandeha ny adihevitra fa niompana kokoa momban'ny lehilahy sy ny fomba fijerin'ireo manana fari-piainana ambony ao Ejypta ny resaka fananahana ny Libido. Ahoana no hamalianao izany?
YA: Tsia, miresaka momba ny olana eo amin'ny lehilahy sy ny vehivavy ao Ejypta ny Libido, ary tena nahatsikaiky tokoa ny fomba niafaran'ilay horonan-tsary, (tamin'ireo izay nijery azy) noho izy mifantoka amin'ny fiaraha-monintsika izay tsy mahalala mihitsy ny olana atrehan'ny vehivavy amin'ny lafiny ara-pananahana. Manao azy ireo ho toy ny tsy manana fiainana ara-pananahana isika, toy ny lehilahy, izay mbola mahabe resaka ihany koa.
Raha ny momba ny fari-piainana indray, mino aho fa efa nisy tamin'ny fiaraha-monina foana ny olana hatramin'izay na saranga inona na saranga inona, nefa indrindra eo amin'ireo izay manana fari-piainana antonony, satria tsy manam-bola hanomanana fanambadiana amin'izao andro sarotra izao izy ireo noho ny olana ara-toekarena. Manana kolontsaina efa mafy orina, izay toa mpiaroaro izy ireo, ary tsy maintsy miaina araka ny fepetra efa voapetraka rehefa mivady, raha tsy izany dia tsy azo lazaina ho tena izy ny fanambadiany. Tsy manana fahafahana ara-pitaovana izay tsy misy afa-tsy any amin'ny fari-piainana ambany izy ireo.
GV: Inona no dingana manaraka ho an'ny Libido?
YA:Tetikasa tamin'ny famaranana ny fianarako ihany izy ity, niezaka ny nampihàtra ny traikefako amin'ny maha mpanatontosa fotsiny aho tamin'ny fanatontosako ny ity fanadihadiana fohy voalohany ity. Tsy mbola fantatro izay ho tohiny, nefa manantena aho fa ho re ny feoko, ary ho maro ireo tena hiezaka hieritreritra momba ny vahaolana amin'ireo olana any amin'ny fiaraha-monina. Mino aho fa azontsika vahana tsara ireo olana raha mahavita manao ny dingana voalohany isika, ka tsy ho menatra intsony rehefa maheno ny teny hoe “fananahana”, ary ho tonga saina fa zava-misy marina izany.